शाकाहारी खानामा होटेलले हड्डीका टुक्रा मिसाएर जन्तीलाई खुवाएपछि झण्डै टुटेन विवाह - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १२:०५ 174 पटक हेरिएको
धनुषा : जनकपुरको मुजेलियामा सञ्चालित होटेल राजदरबारमा शाकाहारी खानामा हड्डीको टुक्रा भेटिएपछि बेहुला र बेहुली पक्षबीच विवाद भएको छ । होटेल राजदरबारको बदमासीले विवाह नै टुट्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-९, थापाचोक निवासी रामबाबु यादवले छोरीको विवाहको सम्पूर्ण व्यवस्थापन ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा शुक्रबार राति राजदरबार होटेलमा गरेको थियो । विवाहको लागि सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका २ विद्यानगरबाट शिवशंकर यादवका छोराको जन्ती आएको थियो ।
राति १२ बजे बेहुला र बेहुलीबीच स्वयम्बर सकिएपछि बेहुलासहित सबै जन्ती खाना खानको लागि बसे । दुल्हासहित जन्तीका धेरै मानिस शाकाहारी भएकाले पहिले नै होटेलवालालाई भनेर दालभात तरकारीसहित शाकाहारी भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर जब सबैले थालमा खाना थपेर खाना खान सुरु गरे सबैको खानामा हड्डीको टुक्रा फेला पर्न थाल्यो । त्यसमा धेरै वैष्णव कन्ठीधारी जन्तीसमेत भएकाले आफ्नो धर्मकाे अपमान गरेको भन्दै जन्तीहरु खाना छाडेर छोरी पक्षमाथि आक्रमक भए ।
सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश
मिर्गौला रोगीलाई आर्थिक सहयोग, सहयोगका लागि सबैमा अपिल !
निस्वार्थ समुहद्वारा डा. तिगेलालाई सम्मान
पाँच वर्षलाई ओली नै प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष
इलामको नेपालटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना
शेर्पा संघमा प्रमोद र महिलामा कल्पना